कामना सेवा विकास बैंकको १० वर्षे ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन दिन सकिने | Artha News Nepal
Home	बजार	कामना सेवा विकास बैंकको १० वर्षे ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन दिन सकिने
कामना सेवा विकास बैंकको १० वर्षे ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं – कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले रु. १००० प्रति ऋणपत्रका दरले १० लाख कित्ताले हुन आउँने रु. १ अर्ब बराबरको ऋणपत्रमा आजदेखि आवेदन खुल्ला भएको छ । बैंकले ९ प्रतशित व्याजदरको १० वर्षे ऋणपत्र आजबाट निष्कासन गरेको हो । बैकले जारी गर्न लागेको ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सम्म दरखास्त दिन सकिने छ ।
१० लाख कित्तामध्ये ६ लाख कित्ता व्याक्तिगत तवरबाट विक्री गरिने छ भने बाँकी ४ लाख कित्ता सर्वसाधारण नेपालीको लागि सार्वजनिक निष्कासनबाट विक्री गरिनेछ । सामुहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको ५ प्रतिशत पनि सर्वसाधारणका लागिनै निष्कासन गरिने बैंकले जनाएको छ ।
ऋणपत्र निष्कासन बन्द माघ २६ गते बैंकिङ्ग समय पश्चात् हुनेछ । तर, उक्त समय अवधिमा मागभन्दा कम आवेदन परेमा फागुन ६ गतेसम्म समय थप गरिने छ । ऋणपत्रको विक्री प्रवन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आवेदनऋणपत्रकामना सेवा विकास बैंक
नेप्सेका समुहगत विभाजनमा हेरफेर, कुन कहाँ ?